भारतले किन गर्‍यो नेपाली सवारीसाधन प्रवेशमा कडाई ? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / राष्ट्रिय / भारतले किन गर्‍यो नेपाली सवारीसाधन प्रवेशमा कडाई ?
भारतले किन गर्‍यो नेपाली सवारीसाधन प्रवेशमा कडाई ?
By Digital Khabar on January 25, 2016
वीरगन्ज – भारतले नेपाली सवारी सधानको भारत प्रवेशमा सोमबार देखि कडाइ गरेको छ । बिना रोकटोक सीमावर्ती शहरहरुमा सहज रुपमा आउजाउ गर्दै आएका नेपाली सवारी साधनहरु आज देखि भने भारतीय कस्टमको प्रवेश अनुमति पत्र अर्थात अस्थायी पास लिएर मात्र भारत जान पाउने भएका छन् ।
भारत सरकारले नेपाली नम्बरका मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन एक दिनका लागि प्रवेश गर्दा पनि प्रवेश अनुमति अनिवार्य गरिदिएको हो । रक्सौलसहित नेपाल भारतका २३ वटा व्यपारिक नाकामा यो नियम आज देखि लागु गरिएको रक्सौल कस्टमका एसिस्टेन्ट कमीश्नर कमलेश कुमारले बताए ।
बिहार पटनाको सीमा शुल्क विभागले गत डिसेम्बर २९ तारिखमा जारी गरेको पब्लिक नोटिस अनुसार जनवरी २५ तारिख अर्थात आजदेखि रक्सौल नाकामा पनि यो नियम लागू गरिएको रक्सौल कस्टमले जनाएको छ ।
नेपाली नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन सीमावर्ती भारतीय शहरमा एक दिनका लागि प्रवेश गर्दा पनि अनिवार्य रुपमा कस्टमबाट प्रवेश अनुमति पत्र अर्थात अस्थायी पास लिनु पर्नेछ ।
कस्टमबाट अस्थायी पास लिएका नेपाली सवारीसाधन तीन किलोमिटर भित्र सम्मको भारतीय भूमीमा मात्र आउजाउ गर्न पाउने छन् । अस्थायी पास रक्सौल कस्टमको चेक प्वाइन्टबाट निशुल्क उपलब्ध गराइने रक्सौल कस्टमका एसिस्टेन्ट कमीश्नर कमलेश कुमारले रातोपाटीलाई बताए ।
अस्थायी पास लिएर भारतमा भित्रिएका नेपाली सवारी साधनले फर्कदा रक्सौल कस्टममा पास फिर्ता गर्नु पर्ने रक्सौल कस्टमका सुचना अधिकारी अभिषेक कमलले बताए ।
तीन किलोमिटर भन्दा बढिको दूरी र एक दिन भन्दा बढि अवधीको यात्रा गर्नु परेको खण्डमा भने वीरगन्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट प्रवेश अनुमित पत्र लिनु पर्ने रक्सौल कस्टमले जनाएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोण र सीमा आवागमनलाई व्यस्थित पार्नका लागि अस्थायी पासको नियम लागु गरिएको रक्सौल कस्टमका मिडिया प्रभारी अभिषेक कमलले बताए ।
खासगरि सीमा आरपार हुने अपराधिक गतिविधी र तस्करीलाइ नियन्त्रण गर्न यो नियम लागु गरिएको उनले बताए । पास नलिई भारत प्रवेश गरेको भेटिएमा नेपाली सवारी जफत समेत गरिने रक्सौल कस्टमका अधिकारीले बताएका छन् ।
छोटी नाका र ग्रामीण भेगका नकाबाट सीमावर्ती भारतीय शहर वा गााउमा जान चाहने नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि रक्सौल कस्टमबाटै अस्थायी पास लिनु पर्ने भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।
‘ग्रामीण नाकाहरुमा प्रवेश अनुमति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छैन’ , रक्सौल कस्टमका सुचना अधिकारी अभिषेक कमलले भने ,‘इन्ट्री प्वाइन्ट राखिएको रक्सौल नाकाबाट मात्रै प्रवेश पास उपलब्ध हुन्छ ।’ भारतले लागु गरेको नयाा नियमले दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल र आफन्त भेटघाटका लागि सीमावर्ती भारतीय शहर र गााउमा जाने नेपालीहरुलाइ समस्या हुने भएको छ ।
– See more at: http://www.ratopati.com/news/27909/#sthash.FHQpAm6r.dpuf
तेल भर्न दिइएन : निगम
‘एके ४७’ सहित भारतीय…
भारतले रोक्यो २३…
Related ItemsAndolonBandaBirjungBorderBusinessdigital khabarNationalNepalNewsPoliticsWorld
← Previous Story ‘फुटबलमा अब कालो दिन हुँदैन’
Next Story → नाकाबन्दी १–२ दिनमै खुल्छ : प्रधानमन्त्री
Datbase Select Month July 2018 May 2018 April 2018 February 2018 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013